Aasaaska Twitterka: Sida Loo Adeegsado Twitterka (bilowga ah) | Martech Zone
Weli waa goor dhow in la waco burburka Twitter-ka, in kastoo shaqsiyan waxaan dareemayaa inay sii wadaan cusbooneysiinta aan kor u qaadayn ama xoojinaynin barxadda. Dhawaan, waxay tirtireen tirinta muuqata ee laga heli karo badhamadooda bulsheed ee baraha bulshada. Ma qiyaasi karo sababta oo waxay umuuqataa inay saameyn xun ku yeelan karto ka qeyb qaadashada guud marka aad fiiriso taraafikada Twitter ee guud ahaan goobaha cabbiraadda muhiimka ah.
Cabasho nagu filan… aan aragno waxyaabaha wanaagsan! Hantida xogta waqtiga-dhabta ah ee ku jirta Twitter-ka ayaa ah mid aan toos looga helin khadka tooska ah. In kasta oo Facebook uu noqon karo wadahadalka khadka tooska ah, Twitter wuxuu sii wadaa inuu noqdo garaaca wadnaha aragtidayda. Facebook wuxuu muujiyaa oo shaandheeyaa inta badan xogta, sidaas darteed isticmaalka iyo kaqeybgalka ayaa si aad ah u qallooca. Maahan sidaas Twitter.
Maxaa Twitter ka Duwan
Twitter waa durdur xog ah oo sii socda. Xisaabaadka badan ee aad raacdo, ayaa si dhakhso leh qulqulka u socda. Laakiin waa mid aan la sifeyn, oo aan la bartilmaameedsanin, oo had iyo jeer la arki karo. Si ka duwan barnaamijyada kale ee bulshada, xisaabaadka aad jeceshahay inaad la hadasho waa lagu soo dhowaan karaa. Kaliya tuur @douglaskarr oo waad soo jiidan kartaa dareenkeyga oo si toos ah ayaad iigu soo qori kartaa. Xagee kale ayey taasi suurtogal ku tahay khadka tooska ah? Oo hadaad rabto inaad sameyso cilmi baaris, kaliya raadso ereyga adoo adeegsanaya hashtag, sida #marketing.
Ku Bilaw Twitter
Saxiixa - iskuday inaad raadiso Twitter weyn oo aan lahayn hoosta iyo hoosta isku-dhafan. Maahan in dhammaan gacanta ugu weyn la qaado; marwalba waan la yaabanahay inaan wali awoodno inaan u helno macmiil sax ah macaamiisheenna. Waxaan si weyn ugu talin lahaa inaad lahaato xisaab shaqsi iyo mid shirkadeed halkii aan labada is dulsaari lahaa. Iyada oo leh sumad, dallacsiintu waxyar baa laga filayaa marka loo eego koontooyinka shaqsiyadeed ee aad ka xanaaqi karto dadka isku dayaya inay ku raacaan.
Samee Profile-kaaga - ma jiro qof ku kalsoon ama raacaya astaanta ukunta, markaa hubi inaad ku darto sawir naftaada ah koontadaada gaarka ah iyo astaan ​​shirkaddaada. Waqti sii si aad u habeysid nidaamkaaga midabka oo aad uhesho muuqaal asal qurxoon oo soo jiidan doona xiisaha dadka.
Hayso Bio-gaaga gaaban oo macaan! Isku dayga inaad buuxiso URL-yada, hashtags, koontooyin kale iyo sharraxaadda oo loo soo gaabiyo maahan mid aad u adag. Waa tan tilmaamtayda - waa maxay khibraddaadu iyo maxaa kaa dhigay mid gaar ah? Ku rid iyaga bio iyo dadka waaweyni waxay ku heli doonaan oo ay kugula socon doonaan adiga raadinta.
Soo Degso Barnaamijyada Twitter-ka
Haddii aad ku jirtid desktop-ka, taleefanka casriga ah ama kaniiniga, waxaa jira qof waddani ah Codsiga Twitter waa ku sugayaa! Haddii aad rabto inaad dhammaan wada baxdo, waad soo dejisan kartaa oo aad ku bilaabi kartaa TweetDeck - barxad ballaadhan oo ballaadhan oo leh dhammaan dawannada iyo foodhida.
Tweets - Twitter-ka ayaa ka hadlay sii ballaarinta tirada astaamaha ee tweets-ka oo ka sarreeya 140-ka xaraf. Waxaan hubaa inaanan rajayn, in badan oo ka mid ah farshaxanka iyo soo jiidashada Twitter-ka ayaa ah isticmaalka degdegga ah ee tweet-ka si wanaagsan loo hindisay. Waa sidii qorista haiku; waxay qaadataa tababar iyo xoogaa fikir ah. Si fiican u samee, dadkuna way wadaagi doonaan oo ay raaci doonaan.
Adeegso Hashtags - laban laabo hawlgalkaaga adiga oo dooranaya ugu yaraan hal hashtag, laba ayaa ka fiican. Hadaad rabto inaad xoogaa sameyso baaritaanka hashtag, Waxaan taxnay tan oo ah meerayaal (RiteTag runti waa qabow!). Isticmaalidda hashtags wax ku ool ah ayaa lagu heli doonaa maadaama dadka isticmaala Twitter ay baarayaan barxadda.
Kordhi Gaaritaankaaga Twitter
Ka raadi hoggaamiyaasha shirkadahaaga barta Twitter-ka, raac iyaga, la wadaag waxyaabaha ay ka kooban yihiin, oo la macaamil markii aad ku dari karto qiimaha wadahadalka.
Ka raadi macaamiishaada barta Twitter-ka, raac iyaga, ka caawi, la falgal iyaga, oo dib u dhaji mawduucyadooda si aad u abuurto xiriir shaqo oo wanaagsan.
Ha noqon cayayaan. Ka fogow aaladda tooska ah ee farriimaha tooska ah loo qoro, dadka wax loogu qoro si aan loo baahnayn, iyo adeegsiga kobciya raacahaaga qorshayaasha. Way xanaaqayaan, waxayna si farshaxanimo leh u kordhinayaan lambarradaada iyagoo aan si dhab ah kuu tusin sida wanaagsan ee aad u shaqeyneyso.
Kordhi Marka Aad Qiimaha Siiso
Ma heshay dhacdo soo socota? Jadwal u samee Tweets tirinta dhacdooyinka talooyin ku saabsan sida kuwa raacsan uga faa'iideysan doonaan ka qeybgalka.
Bixi qiimo dhimis markaad awoodid, Twitter wuxuu jecel yahay lambar kuuboon weyn ama qiimo dhimis.
Kaliya ha dhiirrigelin, keen qiimo. Dhageysiga arrimaha dadka raacsan iyo bixinta talooyinka qaarkood oo si guud ah waxay ku bixin doontaa faa iidooyin.
Xusuusnow in Tweets ay duulaan by marka aad haysato wax weyn oo aad wadaagto, la wadaag dhowr jeer.
Isku-darka WordPress iyo Twitter
Iyo haddii aad jeceshahay inaad dib uga daabacdo waxyaabahaaga Twitter, ka Qalabka Jetpack soo bandhig muuqaalka si fiican buu u qabtaa!
Xusuusnow, Twitter waa maaratoon, maahan orod. Kordhi kuwan soo socda si dabiici ah waqti kadibna waxaad arki doontaa faa'iidooyinka. Inta badan sida xiisaha sii kordhaya, ma fariisaneysid ka dib qoraaladaada ugu horreeya. Infograafigani ka yimid Salesforce waxay bixisaa xoogaa aragti dheeri ah… Ma hubo inaad pro noqon doontid (haddii ay jiraan wax noocaas ah), laakiin waa talo wanaagsan.
Tags: kobci kuwa raacsanhashtagssida loo isticmaalo twitterretweetTweetTweetdeckTwitterbarnaamijyada twitteraasaaska twitterTwitter infographicgaadho twitter
Sidee Tafaariiqleyda uga Faa'iideysan karaan Fursadda Ganacsi ee Caalamiga ah Kirismaskan?
15, 2015 at 5: 13 AM
Qalabka wanaagsan ee loogu talagalay dadka raadinaya warbaahinta bulshada iyo talooyinka aasaasiga ah ee SEO… sii wad shaqada wanaagsan!